बिचित्र खबर::Nepal's Online News Portal
अफिस जान्छु भन्दै परपुरुषसलाई भेट्न होटलभित्र गएकी महिलाको यस्तो तस्विर देखेपछि श्रीमान्ले दिए डिर्भोस: खुल्यो अनौठो राज, तस्विर बन्यो भाइरल
एजेन्सी । एउटा तस्विरका भरमा श्रीमान्ले श्रीमतीलाई डिर्भोस दिएका छन् । अफिसियल कामको लागि बाहिर जान्छु भनि निस्कीएकी श्रीमतीले श्रीमानलाई पठाएको फोटो हेरेपछि श्रीमानले श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेको खबर मात्रै होइन उक्त तस्विर पनि भाइरल...
महिलाका यी फोटो देखेपछि पतीले गरे सम्बन्धविच्छेद (भाइरल फोटोसहित)
असोज,१७/ पछिल्लो समय एक महिलाको फोटो सोसियल साइटमा भाइरल भइरहेको छ। बताइएअनुसार यो फोटो देखेपछि उनका पतिले सम्बन्धविच्छेदको माग गरेका थिए। यी महिला को हुन् र कहाँकी हुन् भन्ने खलेको छैन। बताइएअनुसार उनी आफ्ना...
सुत्केरी हुने दिन अपहरण, गुण्डाले पेट काटेर बच्चा निकाले, मेडिकल जाँचमा उड्यो होस!पढ्नुहोस्
असोज,१७/ कोलम्बियामा एउटा निकै आश्चर्यजनक घटना भयो । यहाँकी एक महिलाको गर्भ रहेको ९ महिना पुगेपछि बच्चा जन्मिने दिन नै अपहरण भयो । त्यसपछि अपहरणकारीहरुले पेट काटेर बच्चा निकाले । यो सबै कुरा ती...
पहिलोपटक श्रीमतीसँग सेक्स गर्दा ५ दिनदेखि बेहोस ! जाँच गर्दा डाक्टरकै होस उड्यो
असोज,१६/ डाक्टरको सहयोगमा पहिलो पटक श्रमितीसँग यौन सम्बनध बनाउन सक्षम भएका व्यक्तिको अवस्था गम्भीर भएको छ । ४५ वर्षका एन्ड्रयु वार्डन जन्मिँदा नै लिंग बिना जन्मिएका थिए । इङल्याण्डका डाक्टरहरुले सफल सर्जरीपछि उनको...
यस्ता अनौठो शौचालय देख्‍नु भएको छ ! हेर्नुहोस् तस्विरहरु
असोज,१६/ संसरको सवैभन्दा महत्वपूर्ण बस्तुमा शौचालय पर्छ। हामीलाई खान जति जरुरत छ, त्यती नै आवश्यक त्यसको विशर्जन गर्नु पनि हो। तपाईले पनि महशुस गर्नु भएकै होला शौचालय गएपछि पेट र दिमाग दुवैले आरामा पाउछ...
मान्छेको मासु खाने सुन्दरी!प्रहरीले छापा मार्दा प्रहरीकै गयो सत्तो,पढ्नुहोस्
असोज,१३/रुसमा एक महिलाको वास्तविकता थाहा पाउँदा पुलिस नै त्रसित बनेको छ । यी महिलाको काम यतिसम्म डरलाग्दो छ कि उनको नजिक पर्न पनि सबै डराउँथे । यी महिलाले मानिसहरुको हत्या गरेपछि उनीहरुको मासु खान्थिन्...
राजाको आफ्नी सौतेनी आमासंग यौन सम्पर्क गर्दा गर्दै हत्या!यसैलाई निरन्तरता दिदै ७ जना पुरुष संग यौन सम्पर्क गर्नु पर्ने परम्परा,पढ्नुहोस्
असोज,१३/ हाम्रो समाजिक संस्कार र मान्यता अनुसार जो स्त्री आफ्नो पति बाहेक अन्य पुरुषका बारेमा सोच्दैनन् त्यस्ता स्त्रीमाथ भगवानको कृपा हुन्छ। तर यही धर्तीमा एउटा यस्तो पनि मान्यता छ जहाँ एक स्त्रीले एक भन्दा...
अचम्मको परम्परा! जहाँ ७ जना परपुरषसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ,पढ्नुहोस्
६ दिनसम्म श्रीमतीको लाससँगै सुते यी पुरुष! भेट्न आउने आफन्तहरुको थामिएन आशु
पत्नीको शवसँगै उनी बसिरहँदा धेरै आफन्तहरु उनलाई भेट्न आए । उनको हालत देखेर आगन्तुकहरु भक्कानिएर रुन्थे । उनले पत्नीलाई यति धेरै माया गर्दथे की उनी आफ्नी पत्नीको शवलाई डाक्टरको हातमा सुम्पिन चाहन्नथे…. पत्नीको शवसँगै उनी...
चार वर्ष नियमित यौन सम्पर्क गर्दापनि महिला भर्जिन! कसरी सम्भव भयो ?पढ्नुहोस्
असोज,१०/एक चिनिया दम्पत्ति बिहे गरेको चार वर्ष भैसक्दा पनि बच्चा नजन्मिएका कारण चिन्तित थिए । चार वर्षदेखि नियमित रुपमा सेक्स गरिरहँदा पनि गर्भ नबसेपछि उनीहरु उपचारका लागि डाक्टरकोमा गए । तर जब उनीहरु डाक्टरकोमा गए,...